Muuse Biixi : Farmaajo Waxaa Doortey Ergooyin Ka Socota Lix Maamul Goboleed
HARGEYSA - Madaxweynaha Somaliland oo khudbad ka jeediyey kulan mideysan ee Barlamanada Somaliland isugu yimadeen isagoo ka hadlay waxyaalihii u qabsoomey mudadii 100 maalmood uu xilka hayey.
Muuse Biixi ayaa hadalka uu jeediyey ku sheegey iney istaageen wadahadalkii u dhexeeyey maamulkiisa iyo dowlada Federaalka Soomaaliya kadib markii sida uu hadalka u dhigey weerar qaawan ku soo qaadeen madaxda Muqdisho.
“Nimanka Muqdisho jooga ee weerarka qaawan soo qaaday, sharciyan Caalamka oo dhan baa og in aynaan shaqo ku lahayn waxa ay dhisteen. Xasan Sheekh Maxamuud waxa doortay wufuud ka kala socotay afar Maamul-goboleed, halka Farmaajo ay doorteen ergooyin ka yimid lix Maamul-goboleed. Jamhuuriyadda Somaliland, ilaa 1991-kii, marna waxa halkaa ka socda shaqo kuma lahayn, caalamkuna wuu og-yahay.”
Dhinaca kale Madaxweynaha Somaliland ayaa ka hadlay qoraal xisbiga Wadani kalsoonida kala noqonayaan guddiga doorashada maamulkaas.
Khudbada Madaxweynaha Somaliland Hoos Ka Akhriso.
Muuse ayaa sheegey in madaxda Soomaalida haysan aqbaliyad ay maamulkiisa kaga hor-istaagaan mashaariicda ka socota Somaliland.
3.Inay Somaliland hesho taageero dhaqaale oo dalka lagu horumarinayo (Bi-lateral and multi-lateral support).
Hay’ado kala duwan oo madax-bannaan ayaa si habaq la'ah uga fuliya mashaariic biyo kaydin ah ama biyo qodis ah. Hase yeeshee, intooda badani ma yeeshaan raandhiis. Sababtoo ah malaha qorshe sugan, gacan ku hayn joogto ah iyo kormeer. Waayo-aragnimaddu waxa ay inna faraysaa, si aan u xallino arrintan aan kor ku xusay, waa in aan hirgalinno Xeerarka iyo Shuruucda Biyaha Dalka.
Warsidaha GO ayaa ogaadey in kulankii maanta isugu yimaadeen golaha Wasiirada Puntalnd....
Somaliland: Muuse Biixi oo Golihiisa Wasiirada Isku Shaandheyn doona [Sababta]
Somaliland 20.06.2018. 02:00